Eto ianao: Home / Drivers / WhatsApp Plus Latest Version vaky
WhatsApp Plus Latest Version vaky
Jona 9, 2017 By Albert Trotter Leave a Comment
WhatsApp Plus app has come with improved features. This application does not go with your smartphone, nefa afaka mahazo izany avy amin'ny fivarotana kilalao. People find it quite impressive because WhatsApp Plus Crack helps you to connect with your friends and sibling anytime. Afaka ny ho mifandray amin'ny fianakavianao amin'ny alalan'ny feo antso, ary afaka ihany koa ny lahatsary manao antso ho amin'ny olona izay mipetraka lavitra anareo hijanona mifandray.
Ny fampiharana dia namboarina tanteraka dikan-tenin'ny ankehitriny WhatsApp, izay afaka personalize ny Emoticons sy hanova ny mombamomba ny fangatahana. Ny fampiharana no misy fotsiny mba ho eo amin'izao fotoana izao WhatsApp fampiharana.
Izany dia Ban Porofo ary koa manohana antso peo sy Video Antso. Ny rindrankajy dia mamela anao Afeno nahita hafatra farany rehefa tafiditra farany tao.
You can protect your WhatsApp Plus Crack chat, sata, profile and about, through Privacy MODs that the application is providing you. Izany koa Themes Mods eo amin'ny fampiharana.
Afaka maka ny toerana tena misy lohahevitra amin'ny alalan'ny Theme Server.
Ny fampiharana koa dia mamela anao 13 miboiboika Style sy ny 17 Change kongona Mod hifidy. Ny fampiharana no Counter antontan'isa ho an'ny vondrona sy ny Media mialoha tsy misy Loading izay midika hoe afaka mijery na ny lahatsary na feo horonantsary tsy misy buffering.
Toy ny hitanao na iza na iza no anaty aterineto rehefa hanokatra ny karajia, ankehitriny ianao dia afaka mahita ny aterineto sy sata Hita farany tamin'ny Main Screen ny WhatsApp.
Ny lahatsary ianao matetika eo amin'ny boky 16MB izao dia afaka Alefaso ho amin'ny habe 30MB, ary afaka mizara ho amin'ny 90 sary indray miaraka amin'ny namanao sy ny fianakavianao.
Ankehitriny ianao dia afaka manova ny sata sy nitendry manodidina 250 taratasy fa tsy 139.
Ny fampiharana dia mamela anao hanohy rohy nomena tamin'ny lamba amin'ny chat avy aminareo namana, na ny mpandefa izay tsy ao amin'ny lisitra fifandraisana. Azonao atao ihany koa ho tapa-kevitra ho any amin'ny havanao rohy toerana hoe ilaina amin'ny fotoana rehetra.
Afaka manavaka Broadcast hafatra sy fitsipika hafatra.
Afaka Afeno ny daty sy ny anarana ianao rehefa maka tahaka hafatra iray na mihoatra.
Manampy anao amin'ny maka tahaka ny namanao 'toerana, ary afaka manova ny kisary koa ny fampiharana sy ny fampahatsiahivana.
Download apk ny fitaovana Android
hametraka izany, raha mahazo misy fahadisoana, esory ny WhatsApp ary miezaka am-boalohany reinstalling
Manamarina ny nomeraon-telefaonina, ary hanomboka.